Radio Muqdisho | Author Archives
News By Liibaan
Maalinta Caalamiga ah ee dhallinyarada, Waa side xaaladda dhallinyarada Soomaaliyeed?
Maanta oo ay taariikhdu tahay 12 August waa maalinta ay dunidu u asteysay in ay noqoto maalinta dhallinyarada adduunka.
Maalintan waxaa la ...	Mas’uuliyadda Bulshada & Ammaanka Dalka Dhageyso
Maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay dilalka iyo qaraxyada lagu wax yeelleynayo bulshada, waxaana ugu dambeeyay qaraxii shalay ...	Alshabaab iyo Laynta haweenka
Maleeshiyada Alshabaab ee xag jirka ahi, waxay gabood fallo xoog leh ku hayaan dadka ku dhaqan deegaannada gacantooda ku harsan , ...	Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo gaaray Garbohaarrey
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Garbohaarrey ee xarunta gobolka Gedo.
Madaxweynaha waxaa ku soo dhoweeyay gegida ...	Laylatul Qadriga iyo Axkaamta Fidrada
Tobanka maalmood ee ugu dambeysa bisha Ramadaan waa maalmaha ugu ajarka badan, waxaana ku jira habeenka Leylatul Qadriga oo ah habeen ...	Ramadaanka & Daadinta Dhiigga
Waxaan ku ku jirnaa tobankii dhexe ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah tobankii dambi dhaafka.
Iyadoo ay muslimiintu ku mashquulsan yihiin ...	Islaamka iyo Waddaniyadda
Iyadoo loo dabbaaldegayo maalintii xorriyadda iyo Qarannimada Soomaaliya, ayaan barnaamijka Tubta Toosan ee toddobaadkan uga hadalnay Islaamka iyo waddaniyadda ama dal ...	AKhlaaqda Dagaalka iyo Diinta Islaamka
Diinteenna Islaamku waxay diiradda saartay nabadda, Erayga Islaam ayaaba asalkiisu ka yimid nabad.
Dunidan aan ku noolnahay dagaal kama dhammaado, ha noqdo ...	Islaamka & Demuqraadiyaddu ma is diidayaan?
Had iyo jeer waxaan maqalnaa erayga Demoqraadiyad, Dowlad dimoqraadi ah , Doorasho demoqraadi ah imw.
Erayga Demoqraadiyad, macnayaalkiisa waxaa ka mid ah ...	Dambiyada ka dhanka ah Bani’aadminimada.
Dalkeenna Soomaaliya oo ay colaado ka jireen sanado 20 ka badan, waxaa ka dhacay dambiyo waaweyn oo ay galeen dhinacyadii dagaallada ...	Islaamku waa diin nabadeed, kumana faafin dagaal
Diinteenna Islaamku waa diin loogu talo galay dunida oo dhan. Nabigeenna ayuu Eebbe ku yiri: Waxaad naxariis u tahay caalamka oo ...	Noocyada Jihaadka Dhageyso
Jihaadku waa camal qiimo badan oo shareecada Islaamkuna ku tilmaantay fiinta Islaamka. Dad badan marka la soo hadal qaado Jihaad, waxaa ...	Shareecada Islaamku maxay ka qabtaa qaraxyada is-miidaaminta ah? Dhageyso
Qaraxyada Ismiidaaminta ah ee ka dhaca dalal badan oo caalamka ah ayaa galaafta nolosha kumannnaan qof oo aan waxba galabsan.
Kooxo hubeysan ...	Xagjirku maxay qiil uga dhigaan dagaalkooda ?
Dunida Islaamka oo aan ka mid nahay waxaa ka jira kooxo hubeysan oo dagaal kula jira dowladaha dalkaas ka dhisan.
Qaarkood waxay ...	Xiriirka Muslimiinta iyo Gaalada maxaa asal u ah? Dhageyso
Dunidan aan ku noolnahay waxaa ku wada nool dadyow ku kala duwan Diimaha,Midabka,Dhaqammada iyo arrimo kale oo fara badan.
Muslimiintu waxay ka ...	Dhexdhexaadnimada Islaamka Sheikh Cali Wajiiz
Diinta Islaamku waa diin dhexdhexaad ah oo ka soo hor jeedda ku talax gagga fikirka iyo ficillada intaba, waxa uuna nabigeennu ...	Sheikh Janaqow: Is-qarxintu Islaamka sal kuma laha
TUBTA TOOSAN 21.03.2014
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax Janaqow oo ahaa waziirkii hore ee Garsoorka Soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga hadlan macnaha dhabta ...	Sheekh Janaqow oo sharraxay macnaha saxda ah ee Jihaad Dhageyso
Jihaadku waxa uu leeyahay macne ka qara weyn dagaalka.
Marka la soo hadal qaado Jihaad, durbadiiba waxaa dad badan maskaxdooda ku soo ...	Shabaab oo laga sifeynayo dalka Dhageyso
Ciidammada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa maalmihii u dambeeyay waday olole ballaaran oo ay ku doonayeen in ay ...	Khawaarijtu waa Eeyaha Ahlu naarka: Iyaga iyo Alshabaab halkee isaga egyihiin?
Khawaarijtu waxa ay ahaayeen koox ka hor timid madaxdii Muslimiinta, waa kooxdii dishay in badan oo ka mid ah asxaabtii nabigeenna ...	Alshabaab & Askareynta carruurta
Maleeshiyada Alshabaab waxay marin habaabisaa carruurta, waxayna u adeegsataa dagaallada halkii ay dugsiyada ka aadi lahaayeen.
Kooxdu waxay qoysaskooda xoog uga kaxaysatay ...	Culimada oo cambaareysay go’aanka Alshabaab ku diideen internetka
Sheikh Muuse Macallin Cagaweyne oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay bayaankii ka soo baxay maleeshiyada Alshabaab ...	Qaraxyadu islaamka waa ku Xaaraan!
“Adduunyada oo la rogo ayaa ilaahey uga fudud in qof muslim ah loo dilo si xaq darro ah”, sidaas ayuu xadiith ...	Gudniinka Fircooniga ahi diinta sal kuma lahan
Gudniinka gabdhaha ee loo yaqaanno FGM waxa uu dhibaato ba'an ku hayaa gabdhaha Soomaaliyeed , waxa uuna keenaa isu furan gabdhuhu ...	Bixitaanka MSF maxaa sababay?
Horraantii bishan August 2013, hay’adda dhaqaatiirka aan Xudduudda lahayn ee loo yaqaanno MSF ayaa ku dhawaaaqday in ay gabi ahaan joogisay ...	Askareynta Carruurtu Waa Dambi “Dhageyso”
Colaadihii dalkeenna Soomaaliya ka oognaa muddada 20-ka sano ka badan, waxay bulshada Soomaaliyeed badeen duruufo adag.
Carruurta iyo haweenka oo ah dadka ...	Cudurka Dabeysha oo ku sii faafaya Soomaaliya, Sidee wax looga qaban karaa? Dhageyso
Mar kale ayuu dalkeenna Soomaaliya ka dillaacay cudurka dabeysha ama Polio.
Wasaaradda Adeegga Bulshada oo qaabilsan faya dhowrka iyo caafimaadku waxay ...	Farxadda Ciidda & Is Caawinta Bulshada
Maalmo kooban ayaa naga xiga ciidda Barakeysan ee Ciidul Fidr, oo waa inta aan la gaarin jimcaha soo aaddan.
Markaas ayay muslimiinta ...	Laynta dadku ma jihaadbaa?
Maleeshiyada Alshabaab, waxay laba jibbaareen falalkooda ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed ee Muslimka ah ee isugu jira qarxinta,dilalka gaadmada ah, miinooyinka ...	Tallaalka Dabeysha cudur miyaa laga qaadaa?
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa dalka si xowli ah uga soconayay ololaha tallaalka dabeysha, kaas oo carruurta iyo xitaa dadka waaweyn looga ...	More »
Sawirka Maanta	Wararka DunidaKeydka Sawirrada	DAAWO SAWIRRADA:- Xuska ciidanka booliska Soomaaliyeed
Wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha Musataf Sheekh Cali ...	TOOS U DAAWO SNTV	Toos U Dhageyso Radio Muqdisho	SHIRKA BAARLAMAANNADA OIC TEHRAN	Tubta Toosan
Aftida RaadiyahaSorry, there are no polls available at the moment.Polls ArchiveCayaaraha	Real Madrid oo Ku Guuleysatay Koobka Naadiyada Aduunka ee Fifa Club World Cup “SAWIRRO”
Kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium 3-0 ...	Juventus oo Ka Badisay Kooxda Cagliari
Kooxaha San Lorenzo iyo Auckland City ayaa ciyaartii ...	Barnaamijyada	Barnaamijka kulanka todobaadka oo looga hadlay magacaabista R/wasaaraha (Sawirro+Dhageyso)
Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada waxa uu ka mid yahay Barnaamijyada Maalinlaha ah ee ka baxa Idaacadda waxaana dhageystayaasha Radio ...	Tweets by radiomuqdisho	Tweets by @radiomugadisho